बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्ध: भविष्यका लागि शीर्ष भविष्यवाणीहरू Martech Zone
हामीले भर्खर एउटा चाखलाग्दो अनुभव गरेका थियौं जिलिस हाउससँग अन्तर्वार्ता र छलफलको विषयहरू मध्ये एक थियो बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धता। त्यो अन्तर्वार्ता ताजा, भित्री दृश्य बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धताको लागि यी भविष्यवाणीहरू हालसालै प्रकाशित गरियो। तिनीहरू नयाँ पुस्तकमा आधारित छन्, हासिल गर्नका लागि पigned्क्तिबद्ध: तपाइँको बिक्री र मार्केटिams टोलीहरुलाई कसरी एकल सेनाको विकासको लागि एकता गर्ने, इनसाइडभ्यूको सीएमओ ट्रेसी इयलर, र इन्टरप्राइज बिक्री एन्ड्रिया अस्टिनको वीपी द्वारा लेखक।
पूर्वानुमानहरू १,००० को एक सर्वेक्षणको परिणाममा आधारित थियो बिक्री र मार्केटिंग नेताहरू। इइलर र अस्टिनको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि मिसिलिमेन्टको समस्या निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ र विच्छेदनले प्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा असर गरिरहेको छ।
बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धता तातो बटनको मुद्दा हो जुन कम्पनीहरू एक पटक र सबैको लागि फिक्सिंगमा केन्द्रित छन्। यो केवल बिक्री र मार्केटिंग एक अर्काको गला मा रहनको लागि छैन; यो किनभने पign्क्तिबद्धताले राजस्व र छिटो बृद्धिलाई अनुवाद गर्दछ। त्यसो भए, अब के हुन्छ? साथीहरूसँग कुराकानीको महिना पछि, हामी अनुमान लगाउँदछौं जहाँ प where्क्तिबद्धता चलिरहेको छ त्यसैले कम्पनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। ट्रेसी इयलर, इनसाइडभ्यूको सीएमओ
लेखकहरूले बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धताको भविष्यका लागि निम्न सात भविष्यवाणीहरू प्रस्ताव गर्छन् किनभने व्यवसायहरूले मार्केटिंग र बिक्री प al्क्तिबद्ध गर्ने फाइदाहरू महसुस गर्छन् र २०१ 2017 मा पign्क्तिबद्ध प्रयासहरू बढाउनको लागि तयार छन्:
परामर्शदाता विक्रेताको उदय। सब भन्दा सफल विक्रेताहरु संकर बजार बन्नेछ। २०२० सम्ममा B2020B विक्रेताहरूको आवश्यकता बढि “परामर्शदाता विक्रेता” को माग गर्न थाल्नेछ, फोरेस्टर रिसर्चका अनुसार। खरीददारहरूले आफैंमा बढी अनुसन्धान गरिरहेका छन् र लेनदेन-आधारित विक्रेताहरूको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले पारम्परिक बिक्री मोडेल समायोजन गर्न आवश्यक छ। यी नयाँ परामर्शदाता विक्रेताहरु आफ्नो उद्योग, उत्पादनहरु, क्रेता व्यक्तित्व, र ग्राहक यात्रा मा विज्ञ बन्नेछ, र मार्ग मा मार्केटिंगको सक्षमता चाहिन्छ। केही उद्योगहरू उही टोलीहरूमा बिक्री र मार्केटिंग मर्ज गर्न सुरु गर्दछ।
क्रस-प्रशिक्षण अत्यावश्यक हुनेछ। सब भन्दा वांछित कामदारहरू ती हुन् जसले उनीहरूको विशेषज्ञताको डोमेन बाहिर अनुभव खोज्छन्, विक्रेताहरू सहित जुन मार्केटिंग बुझ्छ र बिक्री पृष्ठभूमिका साथ बजारहरू। प्रगतिशील कम्पनीहरूले औपचारिक पनि गर्नेछन् र कार्यस्थलमा क्रस प्रशिक्षणलाई प्रोत्साहित गर्नेछन्।
पाइपलाइन विपणन प्रदर्शन मापन को प्राथमिक तरीका हुनेछ।ईन्साइडभ्यूको अनुसन्धानका अनुसार 66 XNUMX प्रतिशत मार्केटरहरू पाइपलाइन मापन गर्ने प्राथमिक तरिका हो भन्छन्। उन्नत कम्पनीहरूले टोली राजस्व हेर्न सुरु गर्नेछन्, जहाँ प्रत्येक बिक्री प्रतिनिधि कोटाको एक अंश मार्केटिंगको जिम्मेवारी हुनेछ। मार्केटिंगलाई प्रत्येक प्रतिनिधिसँग घनिष्ठ सहकार्यमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ जहाँ उनीहरू वास्तवमै रिपब्लिक कोटामा उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव मापन गर्न सक्छन्।
सम्पूर्ण ग्राहक यात्रा खाता केन्द्रित हुनेछ। एबीएम पहलहरूले अन्य मार्केटिंग लगानीहरूलाई सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्न जारी राख्दछ, सफलताको लागि एक मोडल सिर्जना जुन भविष्यमा बिक्री र मार्केटिंगमा सीमित हुँदैन। कम्पनीहरु को लागी खाता आधारित प्राथमिकता को लागी तयार हुनुहोस् सबै.
ग्राहक डाटा रणनीति अधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्योग अनुसन्धानले देखाउँदछ कि व्यवसायहरू जसले उनीहरूको मार्केटिंग र बिक्री निर्णयहरूको केन्द्रमा डाटा राख्छन् मार्केटिंग आरआईआई लाई १ to देखि २०% ले सुधार गर्दछ (विन्टरबेरी ग्रुप)। फलफूल मार्केटिंग र सेल्स टेक्नोलोजी ल्याण्डस्केपमा क्यापिटलाइज गर्न, सफल कम्पनीहरूले उनीहरूको टेक्नोलोजी पूर्वाधार र ग्राहक डाटा रणनीतिलाई सुदृढीकरण र समेकन गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनेछ। त्यसो गर्नाले कम्पनीहरूलाई सहयोगी, साझा ग्राहक बुद्धिको विकास गर्न अनुमति दिँदछ जसले उनीहरूलाई अधिक रणनीतिक प al्क्तिबद्ध गर्न सक्षम गर्दछ।
सहस्राब्दीको ठूलो प्रभाव छ। २०१ 2016 मा मिलेनियलहरूले बेबी बुमरलाई देशको सबैभन्दा ठूलो जीवित पुस्ताको रूपमा छोडिदियो। यसको मतलब उनीहरूले बिक्री बलको मेकअप र कौशल सेटलाई परिवर्तन गरिरहेका छन्। मिलेनियलहरू अधिक उद्यमशीलता, अनुकूलक र सहयोगी हुन्। तिनीहरूसँग शिक्षा, संचार, र क्यारियर उन्नतिको लागि पनि फरक अपेक्षाहरू छन्। सफल कम्पनीहरूले उनीहरूको संगठनात्मक शैलीहरू अनुकूलन गर्न सुरू गर्नेछन् जुन यस पुस्ताको उत्तम प्रतिभालाई आकर्षित गर्न र कायम राख्न, र विचार गर्नुहोस् कि उम्मेदवारहरू भाडामा लिने प्रक्रियाको भागको रूपमा पign्क्तिबद्धको लागि तयार छन् कि छैनन्। र आजका सहस्राब्दीहरू भोलीका खरीददारहरू हुन्। कम्पनीहरूले आफ्नो शैली अनुकूल गर्न आवश्यक छ।
अकादमीया समातिन्छ। विश्वविद्यालयहरूले औपचारिक बी2बी कार्यक्रमहरू वास्तविक विश्वका लागि विद्यार्थीहरू बिक्री, मार्केटि, र डाटा फ्रन्टमा तयार पार्नका लागि आवश्यकको रूपमा हेर्नेछ। हेर्नको लागि अपेक्षा गर्नुहोस् अधिक विश्वविद्यालयहरूले बिक्रीमा डिग्री प्रदान गर्दछ, मात्र बजार वा लेखा। साथै, थप संस्थानहरूले उपभोक्ता मार्केटि beyond भन्दा बाहिरको मार्केटिंग डिग्रीहरू आधुनिकीकरण गर्नेछ B2B मा फोकस गर्न। अन्तमा, डेटा विज्ञान र डाटा मा अधिक व्यापार केन्द्रित डिग्री अपेक्षा विश्लेषण डेटा व्यापार को सफलता को लागी अधिक महत्वपूर्ण बन्ने रूपमा।
यहाँ इन्फोग्राफिक छ, बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धको भविष्यको लागि शीर्ष P भविष्यवाणीहरू:
InsideView को बारेमा
इनसाइडभ्यूले विश्वको ब्यापार वार्तालापलाई शक्ति प्रदान गर्दछ, २००० भन्दा बढी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको जाने बजारका रणनीतिहरूलाई भोल्युम-आधारित अधिक लक्षित दृष्टिकोणमा पुनः परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ। यो अग्रणी बजार खुफिया प्लेटफर्मले बिक्री र मार्केटि teams टोलीलाई चाँडै राम्रो लक्ष्यहरू पहिचान र योग्य बनाउन, अधिक प्रासंगिकताको साथ संलग्न हुन, अधिक सम्झौताहरू बन्द गर्न, र खाताहरू विस्तार गर्न र विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। इनसाइडभ्यु एकमात्र कम्पनी हो जसले उद्योगको सब भन्दा सटीक कम्पनी र सम्पर्क डेटासँग सुरू गर्दछ र यसलाई प्रासंगिक, वास्तविक-समय व्यवसाय अन्तर्दृष्टि र प्रामाणिक जडानको साथ बढाउँदछ।
टैग: खाता आधारित मार्केटिंगपरामर्श बिक्रीपरामर्श बिक्रीसीआरएमक्रस प्रशिक्षणग्राहक डाटामार्केटिंग पign्क्तिबद्धतामार्केटि performance प्रदर्शनपाइपलाइनबिक्री पign्क्तिबद्धबिक्री र बजारबिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धताबिक्री प्रदर्शन